मध्याह्न अघिनै अस्ताएका सन्त :: Setopati
गृष्म ऋतु नजिकिएको संकेत आइतबार बिहान डेनमार्कमाथिको खुला आकाशले गरिरहेको थियो। सिरसिर हावा चलिरहेको थियो। दिन घमाइलो थियो। त्यो घमाइलो र उज्यालो दिनले नेपालीका लागि एउटा अँध्यारो लिएर आयो। डेनमार्कमा सिंगो नेपाली समुदाय भावविह्वल भयो।
युरोपमा नेपाली समुदायको एक चम्किलो तारा मध्याह्नपूर्व नै अस्तायो। सन्तकुमार थापा जो सधैं नाचिरहन्थे, अरूलाई पनि नचाउँथे र हसाउँथे। त्यसदिन सबैलाई रूवाएर गए। सधैं शान्त र हसमुख थापा त्यस दिनदेखि चिरशान्तिको निद्रा निदाए।
४० वर्ष पनि पुगेका थिएनन्। दैवले उनलाई ‘४० वर्ष कटेसी रमाउँला’ भन्नै दिएन। जति बाँचे अरूलाई रमाइलै बनाइरहे। केटाकेटीलाई गीत सिकाए। नेपाली संस्कृति देखाए। नेपाली समुदायमा नेपाली मौलिक संस्कृतिका लागि सधैं चम्किलो ज्योति बनेर बलिरहे।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) युरोपका संयोजक र ग्लोबल नृत्य प्रवर्धन समितिका संयोजक थिए। युरोपका नेपालीभरमा कला, संस्कृति र नृत्यको प्रवर्धनको अगुवा गरिरहे।
२/४ वटा म्युजिक भिडियोको निर्देशन गरे। दर्जन बढी गीतमा कोरियोग्राफी गरे। सयौं गीतमा कम्मर मर्काए। इनास डेनमार्कको संस्थापक अध्यक्ष भएर नेपालीलाई नेपाली कला, संस्कृति र नृत्यको डोरीमा कसिलो गरी बाँधे।
नेपाली राजदूतावास, एनआरएनए, इनासलगायत संघसंस्थाले मात्रै होइन विदेशी मञ्चमा नेपाल झल्कने संस्कृति वा नृत्य पस्किँदा उनै सन्त नेतृत्वको टोली अग्रपंक्तिमा हाजिर हुन्थ्यो।
र, एकै दिनले सबै चिज बदली दिइसकेको छ। अब भोलिका दिनमा युरोपका मञ्चहरुमा सन्तको हँसिलो र जोशिलो अनुहार हुने छैन। उनको जादुमयी नृत्य देखिने छैन। उनको नाच फेरि हेर्न लालयित दर्शकले ‘वान्स मोर सन्त’ भन्ने छैनन्।
आफूसँगै जोडी बाँधेर डान्स गर्ने उनकी जीवन संगीनी मल्लिका प्रधान एक्लो हुनेछिन्। थाहा छैन, सन्तबिना अब उनी मञ्चमा कम्मर मर्काउँलिन् ! ताते–ताते गराउँदै हिडाउने आफ्नो प्रिय बाबा गुमाएकी छन् ५ वर्षे छोरीले।
नेपाली जमघटहरुमा मिठो मुस्कानसहित अभिवादन गर्दै भद्र सन्त झुल्कने छैनन् अब। सन्त जी यसो गरौं, उसो गरौं भन्दा कहिल्यै नाईं र हुन्न कहिल्यै नभन्ने प्रिय मान्छे युरोपको नेपाली समुदायले गुमायो।
काठमाडौं मच्छेगाउँ घर भएका सन्त श्रीमती मल्लिका प्रधानसहित सन् २०१० मा ग्रिनकार्ड भिसामा डेनमार्क आए। नाचगान गर्दागर्दै सन्त र मल्लिका प्रधानबीच नेपालमै विवाह भएको थियो। डेनमार्कमा संघर्ष गर्दागर्दै नेपाली समाजमा घुलमिल भए। केही समयमा उनकै नेतृत्वमा इनास गठन भयो।
सुरूताका नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च (एनपिपिएफ) डेनमार्कमा भएका सांस्कृतिक पोसाकहरु मागेर युवायुवतीलाई नेपाली गीतमा नाच्न सिकाए। गतिलो टिम बनाए।
छोटो समयमै तुलानात्मक रुपमा थोरै नेपाली बस्ने डेनमार्कमा पनि सांस्कृतिक टोली गज्जब बनाए। युरोपका बिभिन्न मञ्चमा उत्कृष्ट पनि बनाए। २ पटक इनासको अध्यक्ष भएपछि फड्को मार्दै युरोपको संयोजकमा निर्वाचित भए। युरोपभर राम्रो छाप छाड्ने योजना बनाएका थिए।
कोरोना महामारी सुरु भयो। सबै काम चौपट भयो। जिन्दगी यस्तै–यस्तै तरिकाले चल्दै थियो। गएको अक्टुबरमा त उनको जीवनमा भयानक आँधीहुरी आयो, त्यो आँधीहुरीले आइतबार भौतिक दुनियाबाट छुटायो। उनलाई ‘ब्लड क्यान्सर’ भएको अक्टुबरमा थाहा भयो। उपचार सुरु भयो। आत्मबल पनि बलियो बनाएका थिए। मार्चमा ‘बर्न म्यारो’ को अप्रेसन भयो। सोंचे अनुसार सफल हुन सकेन। र, ४१ वर्षको उमेरमा उपचारको क्रममा निधन भयो। उनको पार्थीव शरीरलाई अन्तिम संस्कारको लागि नेपाल लैजाने तयारी छ।
‘कहिलेकाँही यस्तै पर्दोंरहेछ, छिटो निको हुन्छु होला,’ सन्तकुमार थापा मगरको यो सन्देश केही हप्ताअघि म्यासेन्जरमा आएको थियो। सामान्य बिरामी हुनुभएको होला छिट्टै ठिक होला नी भन्ने भयो। सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनेर त्यसैगरी पठाए। मेरा कानहरु निको भएको खबर सुन्न आतुर थिए। तर, उल्टो खबर सुन्दा एउटा डरलाग्दो सपना देखेजस्तो भयो। सत्य भन्ने प्रमाणित भएपछि स्तब्ध भएँ!
कुशल नृत्य गर्ने सन्त र मल्लिका जोडी चर्चित थियो। हरेक सांस्कृतिक कार्यक्रममा उनीहरुको खोजी हुन्थ्यो। नृत्य प्रतिभामार्फत जादु छर्ने यो जोडीमाथि स्टोरी गर्ने मेरो योजना थियो। तर, कस्तो बिडम्बना आज अबिचुरी लेख्नुपर्ने भयो ! समय कस्तो निष्ठुर बनेर आयो भने नी मन सम्हाल्नै गाह्रो !
नेपाली समुदाय भावविह्वल !
सन् २०१७ मा नेपाली समुदायका अगुवा विष्णु पौडेलको ब्रेन ट्युमरका कारण निधन हुँदा पनि त्यतिबेला नेपाली समुदाय मर्माहत भएको थियो। अहिले सन्तले पनि सबैलाई त्यसैगरी रुवाएर गए।
‘अब नेपाली कला र डान्समा गज्जब काम गर्ने हो, इनासका लागि पनि धेरै गर्नुछ,’ सन्तले आफ्ना नजिकका साथी गायक राजमान तामाङसँग सपना सुनाएका थिए, ‘क्वालिटीयुक्त दाम्मी म्युजिक भिडियोहरु बनाउने हो, मिलेर काम गर्नुपर्छ है।’ एउटा साह्रै असल साथी र दाजुलाई गुमाउँदा धेरै पीडाबोध भएको भक्कानिँदै तामाङले सुनाए।
डेनमार्कका दर्जनौं युवा र बालबालिकालाई सन्तले नाच्न सिकाएका छन्। जसका कारण ती कलाकार धेरै ठूला मन्चमा समेत पुगेका छन्। ‘नाच्न नजान्ने मेरी नानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनमा उहाँ (सन्त)ले गरेको योगदानलाई जिन्दगीभरि भुल्न सक्दिनँ,’ एनआरएनए डेनमार्कका उपाध्यक्ष अन्जु पराजुलीले भनिन्।
सधै सामाजिक कार्यमा सक्रिय पूर्वक लाग्ने सन्त सम्झनामा संधैभरि बाँच्ने नेपाली समुदायका अर्का अभियन्ता महेन्द्र खड्काले बताए। ‘डेनमार्कमा कोही नेपाली यति धेरै इमान्दार र असल छ भने त्यो सन्त हुनुहुन्थ्यो,’ एमएमएस इभेन्ट्सका अगुवामध्येका एक खड्काले थपे, ‘उहाँसँग मिलेर धेरै काम गरियो, यस्तो सज्जन मान्छे अब भौतिक रुपमा नभएपनि सम्झनामा बाँचिरहनु हुनेछ।’
इनासका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष नेदरल्यान्ड निवासी पुष्प बरूवालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपाली कला–संस्कृतिको सम्वद्र्धनमा तपाईंको योग्दान अनन्त–अनन्तसम्म स्मरणीय रहनेछ। तपाई हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ। हाम्रो स्मृतिमा अमिट हुनुहुन्छ। सधै–सधै, हाम्रो अस्तित्व रहेसम्म। इनासको अस्तित्व रहेसम्म तपाईं अमर रहनुहुनेछ। तपाईको योगदान अमर रहनेछ।’
युरोपका विभिन्न देशमा रहेका सामाजिक संस्थाहरु, एनआरएनए, विभिन्न देशका इनास, कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिहरुले उनको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्।
स्पेन बस्ने नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च (एनपिपिएफ) युरोपका महासचिव गंगा भुषालले सन्तको निधनले नेपाली समुदायलाई अपुरणीय क्षति पुगेको बताए। धेरै नेपालीहरु बस्ने पोर्चुगलका अभियन्ता नवीन तिमिल्सिनाले पहिला कलाकारिता क्षेत्रमा सन्तसँगसँगै काम गरेको क्षण सम्झे।
पत्रकार प्रकाश सापकोटाले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘राम्रा मान्छेलाई नै ठूला रोगले समाउने ! छोटो समयमा भ्याएसम्म समाजमा राम्रो छाप छोड्ने र अस्ताउने ! यो कस्तो नियति ? प्रवासमा नेपाली कला–संस्कृतिको उत्थानमा आफूमात्र समर्पित होइन, अरुलाई पनि संगठित र नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्न दिलोज्यानले खटिएका डेनमार्कका एक होनहार नेपाली प्रतिभाले अल्पायुमै आफ्नो भौतिक जीवनसँग हारेको खबरले स्तब्ध छु।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १५, २०७८, १३:०२:००